Olee otú Naghachi Data si Xbox 360 Flash Drive
> Resource> Flash Drive> Olee naghachi Data si Xbox 360 Flash draịva
Enwere m ike Naghachi Data si My SanDisk USB Flash Drive?
Ndewo, m nwere Xbox 360 na m zụrụ ihe HP 4 GB USB Flash Drive iji na ya. A ụtụtụ na m chọpụtara na m flash mbanye ọ dịghịzi ghọtara site m Xbox 360. Mgbe m jikotara flash mbanye na kọmputa m, m nwetara enweghị faịlụ na ya. Bụ n'ebe ọ bụla m ụzọ na-agbake data si m Xbox 360 flash mbanye? M mkpa m data azụ ngwa ngwa. Daalụ nke ukwuu.
E nwere ọtụtụ ihe na-eme ka gị Xbox flash mbanye data ọnwụ, dị ka mis-njikwa, virus agha, usoro njehie, wdg Ma ọ bụ nnọọ ekwe omume na-agbake data si Xbox 360 flash mbanye ma ọ bụrụ na ị na-eso ezi instructions.The ihe mbụ mkpa ka ị na-elekọta bụ ịkwụsị iji gị Xbox 360 flash mbanye, n'ihi ọhụrụ data na flash mbanye nwere ike overwrite furu efu data. Mgbe ahụ ị pụrụ abịa Internet anya n'ihi na a-atọ ndị ọzọ mgbake usoro.
Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ a ike ngwá ọrụ gị ịrụ Xbox 360 flash mbanye mgbake na naanị ụfọdụ mfe clicks. Site na iji ya, ị nwere ike mfe naghachi a nnukwu ego nke faịlụ na ụdị si gị Xbox 360 flash mbanye, gụnyere music, videos, foto, akwụkwọ faịlụ, wdg Ugbu Wondershare Data Recovery bụ dakọtara na ma Windows na kọmputa na Mac.
Ị nwere ike ibudata ikpe mbipute nke Wondershare Data Recovery si n'okpuru na mgbe ahụ na-amalite mgbake.
3 Nzọụkwụ iji weghachite Lost Data si Xbox 360 Flash Drive
Rịba ama: N'okpuru ebe ntụziaka bụ maka Windows kọmputa ọrụ. Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac onye ọrụ, biko ibudata Mac version nke Wondershare Data Recovery na ị pụrụ ịgbaso yiri nzọụkwụ hazie mgbake.
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị Xbox 360 flash mbanye na kọmputa na igba egbe Wondershare Data Recovery. Ahọrọ na-aga "Ọkọlọtọ mode", mgbe ahụ ị ga-ahụ ihe interface-egosi dị ka oyiyi n'okpuru. Ebe ị ga-awa na 3 mgbake ụdịdị. Iji weghachite furu efu data si flash mbanye, ka na-agbalị "Echefuola File Iweghachite".
Cheta na: biko hụ na gị na Xbox 360 flash mbanye nwere ike ghọtara dị ka a ike mbanye na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 2 A nzọụkwụ, mkpa ka ị họrọ na draịvụ ike gị Xbox 360 flash mbanye na pịa "Malite" ka iṅomi ndị flash mbanye.
Rịba ama: I nwekwara ike họrọ "Kwado Deep iṅomi" maka a miri scanning, ma naanị nkịtị Doppler uche na-egosiputa mbụ aha nke hụrụ faịlụ.
Nzọụkwụ 3 Mgbe scanning, niile hụrụ data ga-egosipụta na edemede ma ọ bụ faịlụ ụzọ. Ị nwere ike ịlele ma ha bụ ndị ihe ị na-aga na-agbake ma ọ bụ site faịlụ aha. Plus, ị nwekwara ike ihuchalu hụrụ image faịlụ.
Na njedebe, ị dị nnọọ mkpa iji họrọ faịlụ gị mkpa ma pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị.
Cheta na: Biko adịghị na-weghachiri eweghachi faịlụ azụ ka flash mbanye mgbe mgbake, n'ihi na ọ pụrụ ime ka mgbake ọdịda.